अय्यूब 10 ERV-NE - “म आफ्नो - Bible Gateway
अय्यूब 10 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
10 “म आफ्नो जीवनलाई घृणा गर्दछु।
यसकारण म स्वतन्त्र रूपमा गुनासो पोख्नेछु।
मेरो मन एकदमै तितो छ, यसकारण अब म बोल्नेछु।
2 म परमेश्वरलाई भन्ने छुः ‘मलाई दोष नदिनु होस्।
मलाई भन्नुहोस, मैले के गल्ती गरेको छु?
मसित विरोध गर्ने तपाईंसँग के कारण छ?
3 परमेश्वर, मलाई चोट पार्दा तपाईं खुशी हुनुहुन्छ?
यसले के देखिन्छ भने तपाईंले जे बनाउनुभयो त्यसको वास्ता गर्नुहुन्न।
अथवा तपाईं त्यो दुष्ट मानिसहरूले बनाएको योजनाहरूसित खुशी हुनुहुन्छ।
4 परमेश्वर, तपाईंसँग मानवी आँखाहरू छन्?
तपाईं मानिसहरूले देखे जस्तै देख्नु हुन्छ?
5 के तपाईंको आयु मानिसको जस्तै छोटो छ?
के तपाईंको जीवन हाम्रो जस्तै क्षणिक छ?
6 तपाईंले मेरो दोष खोज्नु हुन्छ
अनि मेरो पाप खोज्नु हुन्छ।
7 म निर्दोष छु भनेर तपाईं जान्नु हुन्छ
तर कसैले पनि मलाई तपाईंको शक्तिदेखि बचाउन सक्तैन।
तपाईंको हातले मलाई बनाउनु भयो
अनि मेरो शरीरको आकार बनाउनु भयो।
के तपाईंले मलाई नष्ट गर्नु हुन्छ?
9 परमेश्वर, सम्झनु होस्, तपाईंले मलाई माटोबाट बनाउनु भयो।
के फेरि तपाईंले मलाई माटोमा नै परिणत गर्नुहुन्छ?
10 तपाईंले मलाई दूध सरह पोखाउनु भयो तपाईंले मलाई घुमाउनु भयो
र पनीर बनाए जस्तै निचोर्नु भयो।
11 तपाईंले मलाई हड्डी र मांसपेशीहरूमा राख्नु भयो।
अनि तपाईंले मलाई मासु अनि छालाले पहिर्याउनुभयो।
12 तपाईंले मलाई जीवन दिनु भयो अनि म प्रति धेरै दया दर्शाउनु भयो।
तपाईंले मेरो हेरचाह गर्नुभयो अनि मेरो आत्मालाई जगाउनु भयो।
13 तर तपाईंले हृदयमा यो के लुकाउनु भयो, म जान्दछु तपाईंले हृदयमा के गोप्य योजना गर्नु भएको छ।
हो तपाईंको मनमा के छ म सो जान्दछु।
14 यदि मैले पाप गरें भने तपाईंले देख्नु हुन्छ।
यसैले गल्ती काम गर्दा तपाईंले दण्ड दिन सक्नु हुन्छ।
15 जब म पाप गर्छु,
म दोषी हुन्छु
अनि यो मेरा निम्ति एकदम नराम्रो हुन्छ।
तर म निर्दोष भएता पनि
आफ्नो शिर उठाउन सक्तिनँ।
म अपमानित तथा चिन्ताग्रस्त छु।
16 यदि म सफल हुँदा र गर्व गर्दा, तपाईंले मलाई चोट पुर्याउनु भयो,
जसरी एकजना मानिसले सिंहलाई चोट दिंदछ
त्यसरी नै तपाईंले फेरि मेरो विरूद्ध शक्ति देखाउनु भयो।
17 तपाईंसँग मेरो गल्ती प्रमाणित गर्न,
सधैँ एकजना साक्षी पठाउनु हुन्छ।
एउटा सेनाको पछि अर्को सेना मेरो विरूद्ध पठाए जस्तै
तपाईंले ममाथि घरि-घरि रीस देखाउनु हुन्छ।
18 यसकारण, परमेश्वर मलाई किन जन्म दिनु भयो?
म इच्छा गर्छु मलाई कसैले देख्नु अघि नै म मरेको हुनु पर्थ्यो।
19 म इच्छा गर्छु म नबाँचेको भए हुने थियो।
आमाको कोखबाट सोझै चिहान तिर मलाई डोर्याएको भए हुने थियो।
20 मेरो जीवन प्रायः बितिसकेको छ।
यसकारण मलाई एक्लो छोडी दिनु होस्,
र अब बाचेको थोरै समय आनन्द गर्न पाउँ।
21 जुन अँध्यारो, मृत्यु स्थान, जहाँबाट कुनै मानिस फर्कदैन
त्यस ठाउँमा जानु भन्दा अघि मेरो अलिकति बाँचेको समय मलाई उपभोग गर्न दिनुहोस्।
22 अन्धकार, छायाँ र अन्योल जसलाई कसैले देख्न सक्तैन
अनि त्यो ठाउँ जहाँ प्रकाश पनि कालो हुँदछ,
म त्यस्तो ठाउँमा पुग्न भन्दा पहिला,
अघिनै मैले छाडेको थोरै समय मलाई उपभोग गर्न दिनुहोस्।’”